Cankesen, Ulaştırma Memur-Sen Balıkesir İl Divan Toplantısına Katıldı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara10 BalikesirCankesen, Sarkaalka Gaadiidka-Sen-ka ayaa ku soo biiray Kulanka Gobolka Balikesir
Cankesen, Sarkaalka Gaadiidka-Sen-ka ayaa ku soo biiray Kulanka Gobolka Balikesir
11 / 02 / 2017 10 Balikesir, GUUD, Headline, TURKEY
Dr. Cankesen, Sarkaalka Gaadiidka-Senet Balissir Shirkii Golaha Deegaanka: Wuxuu ka qayb galay shirkii Golaha Gaadiidka ee Gobollada Balikesir oo ay ka qaybgaleen xubno ka tirsan golaha.
Guddoomiye Ku Xigeenka Cankesen, Guddoomiye Ku-Xigeenka Umit Aydin, Sarkaalka Gaadiidka Ahmet Özdemir, Wakiilka Gobolka Balıkesir Rasim Ünlü, wakiilo ka socda ururada kale ee la shaqeeya Memur-Sen, wakiillada ganacsiga iyo xubnayaasha ayaa ka soo qayb galay kulanka.
Isagoo ka hadlaya kulanka, Madaxweynaha Can Canad, Sarkaalka Gaadiidka-Adigu waa masuuliyad weyn. Waa inaan dhamaanteen ka warqabnaa masuuliyaddan. Madaxweynaha Cankesen, oo sidoo kale taabanaya dhacdooyinka argaggixisada ee dalka, ayaa ku sii socdo nidaam dhib badan. Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimadii hore, argagixisadu waa xaqiiqo la og yahay in qof kasta oo dhiigga iyo ilmada aan la gaari karin.
Waxaa cad in khalkhalkaas aan wax faa'iido ah lahayn. Waxay u muuqataa inaan sii wadi doonno habkeena iyadoo aan rajo laga qabin go'aanka iyo go'aanka. Waxaan dejin doonnaa jawi mid waliba oo aan isku duubneyno, annagoo isku duba rideyno inaanu nahay hal iyo wadajir annagoo qaylinaya ereyga xoogga leh ee ka soo baxa midnimada iyada oo aan cidna la dhicin.
Siinta macluumaadka ku saabsan guulaha laga gaarey geeddi-socodka wadaxaajoodka wadajirka, Cankesen wuxuu sheegay in habka loo qiimeeyay sida ugu badan oo guulaha la helay ay kor u qaadi doonto sannad kasta. Inkasta oo aanu gaarnay guulo badan oo ka tirsan laanta adeegga gaadiidka ee Madaxweynaha, waxaan isku dayaynaa inaan iska indhatirno oo aan abuurno aragtiyo taban. Waxaan u baahannahay inaan tirtirno aragtidan xun ee aan ku sharxnay guulaha, ayuu yiri. Kulanka golaha gobolka ee Balikesir, halkaasoo dhibaatooyin iyo soo jeedinno xal loo heley, la soo afjaray fikradaha is-dhaafsiga ee ka qaybgalayaasha.
Kulankan kadib, Guddoomiyaha Cankankan iyo saaxiibadiisa ayaa booqday xarumaha la xiray ee Balıkesir wuxuuna dhageystay dhibaatooyinka shaqaalaha.
Sarkaalka Gaadiidka-Guddoomiyaha Guddoomiyaha Cankesen
Sarkaalka Gaadiidka-Guddoomiyaha Guddiga Cankesen ee Sivas
Sarkaalka Gaadiidka-Guddoomiyaha Guddiga Cankesen Kastamonu ayaa codsaday tareen
Sarkaalka Gaadiidka-Sen Guddoomiyaha Cankesen "TCDD dhamaanteen"
Can Cankesen, Madaxa Gaadiidka Gaadiidka-Sen, booqday TÜDEMSAŞ
YOLDER wuxuu ku soo biiray aqoon-is-weydaarsi ku saabsan Sarkaalka Gaadiidka-Sen
Gaadiidka Sarkaalka-Sen TCDD 2017 Samee Year koowaad ee shirka Management Corporate
Sarkaalka Gaadiidka-Sen iyo TCDD Gaadiidka Guddiga Maareynta Hay'adaha
TCDD 2018 Sannadkii Sarkaalka Gaadiidka-Sen oo la Kulmaya Kulanka Koowaad ee JCC
Sarkaalka Gaadiidka-Sen Waxaad ka codsataa KPDK kulan kulankan loo soo bandhigay wasiirka Sarieroğluna
Sarkaalka Gaadiidka - Waad Codsiyada Loo Baahan Yahay ee Wasiirka KpDK
Sarkaalka Gaadiidka-Sen oo la socda TCDD, 2018 Sanadka ayaa qabtay kulan labaad
Sarkaalka Gaadiidka-Sen wuxuu qabtay 5 ee shirarka Ururka TCDD ee Gobolka
Kaliya Xalka Gacanta, 112 Adeegga Degdegga ah